Ny tsara indrindra any Ekoatera: Pailón del Diablo | Vaovao momba ny dia
Enric Gili | | soso-kevitra, Ekoatera, General, Inona no ho hita, Quito
El Pailón del Diablo (amin'ny fomba ofisialy Cascada del Río Verde) dia riandranon'ny renirano Pastaza, miorina ao amin'ny Ekoatoriana Andes akaikin'ny tanànan'ny Baños de Agua Santa, manamorona ny ala ekoatoriana.
Io no iray amin'ireo manintona mpizahatany indrindra ao amin'ny Faritra Tungurahua (ary azo antoka fa avy any Amerika atsimo rehetra) raha jerena ny toetrany mahatalanjona, ny manakaiky ny làlam-pirenena ary ny haavony mihoatra ny 80 metatra.
Izy io dia manana ny anarany mitovy amin'ny itovizan'ny vato amin'ny tarehin'ny devoly, hita avy amin'ny iray amin'ireo tetezana
Raha herinandro vitsivitsy lasa izay dia nolazaiko anao ny momba ny fitsangatsanganana manan-danja any Ekoatora (ny Valan-javaboahary Cotopaxi sy volkano), ny Pailón del Diablo mety ho hafa. Ny làlan-kizorana rehetra (na tsia) mamaky ny firenena Andes dia tsy maintsy mamakivaky ny tanànan'ny Baños de Agua Santa sy ny manodidina azy (riandrano, volkano, ala ary ala miavaka).
1 Ahoana no ahatongavana any amin'ny riandranon'i Pailón del Diablo?
2 Inona no jerena ao amin'ny riandranon'i Pailón del Diablo?
Ahoana no ahatongavana any amin'ny riandranon'i Pailón del Diablo?
Ny fidirana amin'ny riandrano dia misy tena akaiky ny lalana mampitohy an'i Baños de Agua Santa sy ny tanànan'i Puyo, efa eo afovoan'ny ala Amazon, ary manodidina ny 20 km miala ny tanàna voalohany.
Raha jerena izany akaiky izany dia mora tokoa ny fahazoana azy, tsy toy ny fisarihana hafa any Ekoatera, Pailón del Diablo no azo aleha amin'ny lalana, tsy misy lamasinina.
Mba hahatongavana any Baños de Agua Santa na Puyo, ny zavatra mety indrindra dia ny fanaovana azy amin'ny bus ao amin'ny serivisy fitateram-bahoaka Ekoatoriana. Ny bisy isan'ora dia mampitohy an'i Ambato sy Latacunga (any Andes) miaraka amin'ireo tanàna tropikaly roa.
Rehefa tonga ao Baños ianao dia afaka tonga eo amin'ny fidirana amin'ilay vala:
Amin'ny bus fitateram-bahoaka: na avy any Baños na avy any Puyo. Ny sasany amin'ireo bisy dia mijanona eo amin'ny fidirana ambony amin'ny riandrano (misy fidirana 2). Ny sasany mijanona eo afovoan-dalana fa tena manakaiky ny fidirana ambany. Izy ireo dia manao ny làlana ho any ivelany sy miverina ary manana refy ekena, isaky ny ora dia misy bisy maromaro.
Amin'ny taxi: azo antoka fa ny safidy haingana indrindra nefa koa ny lafo indrindra. Afaka 15 minitra eo ho eo dia tonga ao Pailón del Diablo avy eo afovoan'i Baños ianao. Raha misafidy io safidy io isika, dia tsara ny hifampiraharaha tsara amin'ny vidin'ny dia ary azo antoka fa hanao taxi-be hafa na miaraka amin'ny bus.
Bisikileta. Ity safidy ity dia iray amin'ireo manintona atolotry ny faritra an'ireo mpizahatany: mandeha amin'ny lalana manontolo mankany Puyo amin'ny bisikileta ary mijanona amin'ny riandrano tsirairay eny an-dalana. Amin'ity lafiny ity dia te-hitantara zavatra maro aminao aho. Amin'ny lafiny iray, ny làlana, na dia vita tsara aza, dia be loatra ny fifamoivoizana ary misy tionelina maro eny an-dalana. Etsy ankilany, manomboka any Baños ka hatrany Puyo, ny fidinananao dia mihena hatrany hatrany ambany, fa ny lalana miverina kosa dia miakatra. Farany, mariho fa ny elanelana misy eo amin'ireo tanàna roa ireo dia manodidina ny 30 na 40 km. Raha te-hitsidika ny riandrano amin'ny làlan'ny bisikileta ianao dia tadidio izany. Azo antoka fa ny tena mety indrindra dia ny manao ilay lalana nidina tamin'ny bisikileta sy ny fiakarana tao anaty bus na taxi-4 × 4 izay mandray bisikileta.
Avy amin'ny zavatra niainako dia mamporisika anao aho hijery trano honenana ao Baños ary mankafy ny làlana sy ny safidy rehetra atolotry ny ala Andean avy amin'ity tanàna ity mandritra ny 2 andro farafahakeliny. Tsy ampy ny andro tokana 1, ny fitsangatsanganana amin'ity riandrano ity dia mila tontolo andro iray raha vita amin'ny andaniny roa.
Inona no jerena ao amin'ny riandranon'i Pailón del Diablo?
Araka ny efa nanamarihako teo aloha ny vala dia azo idirana avy amin'ny fanambanin'ny riandrano na avy any ambony. Na dia tsy malalaka tanteraka aza ny fidirana (amin'ny lafiny iray dia, ohatra, ny tetezana fampiatoana voalohany, avy eo tsy), Manoro hevitra anao aho hanao ireo làlana roa. Ny iray tsy mifandray amin'ny iray hafa, amin'ny fotoana iray dia misy sakana manasaraka azy ireo. Raha jerena ny safidy dia hataoko aloha ny làlana ambany ary avy eo ny ambony, heveriko fa somary manaitra kokoa izany.
Raha manao izany isika ny fitsangatsanganana avy any ambany dia hankafizinay voalohany ny ala tropikaly any Amazon amin'ny voninahiny (vorona, hazo, tany mando, ...) ary farany Pailón del Diablo mahavariana avy any ambany. Làlana adiny antsasak'adiny eo ho eo izany mandra-pahatonganao any ambany sy ambany mihitsy aza. Betsaka ny fomba fijery, tetezana ary tohatra hijerena ny riandrano.
Raha manao ny fitsangatsanganana avy any ambony isika dia hankafy ny lalana kely voalohany manaraka ny Reniranon'i Pastaza, misy riandrano kely, ary koa ny zavamaniry ala mando ao amin'io faritra io. Rehefa afaka minitra vitsy dia ho hita ao ny faran'ny riandrano ambony izay ahafahantsika misaintsaina ilay riandrano mahatalanjona (tokony ho 100 metatra ny tsy fitoviana). Avy eo, nisy tetezana hazo mihantona maromaro namboarina izay mampifandray ireo tendro-tendrombohitra marobe ary midina tsikelikely mankany amin'ny faritra ambany amin'ny Pailón. Saika ny tetezana sy tohatra eny an-dàlana dia tsara amin'ny fankafizana ny sary na ny fakana sary. Tena mamela ny moana iray eo imasony izany. Amin'ny teboka sasany dia manome vertigo kely izy io.
Amin'ny manodidina ny riandrano dia afaka mampihatra karazana fanatanjahan-tena tafahoatra ianao, ohatra, ny rafting, fiakarana na tsipika zip. Ho an'ireo tia adrenalinina, Pailón del Diablo no toerana mety indrindra.
Raha fintinina, ity faritr'i Ekoatera ity (ary azo antoka fa azontsika ampitahaina amin'ny firenena sisa) dia tsy fantatry ny besinimaro eropeana ary tsy isalasalana fa izy io dia iray amin'ireo zoro tsara tarehy sy mahavariana indrindra any Amerika atsimo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » soso-kevitra » Ny tsara indrindra any Ekoatera: Pailón del Diablo